Welcome New Mpikambana
× Tongasoa eto amin'ny Forum!
Lazao aminay sy ny mpikambana izay ianao, inona no tianao, ary ny antony dia tonga mpikambana ao Rikoooo.
Isika, dia manasa ny mpikambana vaovao rehetra ary manantena hahita anareo manodidina be dia be!
1 taona 2 volana lasa izay #1055 by FacundoB
Soy nuevo en esto de los foros asi que no se mu bien como como funciona lo de presentaciones.
Eo am-pamakiana azy, dia tsy maintsy misy ny fananganana orinasa fananganana orinasa.
Hoy ny vaovao farany fa ny fotoana sy ny fomba hijerena ny lahatsary dia mamaritra izay efa navoaka tamin'ny novambra vaovao.
Fotoana mamorona pejy: 0.394 segondra